Fahitalavitra : miala any ny « Ankitsipo » Kolo TV | NewsMada
Fahitalavitra : miala any ny « Ankitsipo » Kolo TV
Mitondra fanavaozana sy fanatsarana hatrany. Nanomboka ny zoma teo ny fandaharana vaovao, vokarin’ny sampan’ny fampahalalam-baovao eo anivon’ny fahitalavitra Kolo TV atao hoe « Ankitsipo ». Handraisana vahiny roa avy amin’ny sokajin’olona rehetra ny fandaharana vao noketrehina ary efa masaka ity. Tsy manavaka sehatra sy lohahevitra resahina ny fandaharana ary mivelatra amin’ny lafiny politika sy toekarena ary koa ny sosialy, na ny kolotsaina. Miainga amin’ny vaovao, misy sy ny marina koa.
Anisan’ny vahinin’ny fandaharana ny zoma teo ary mbola azontsika arahina rahampitso talata amin’ny telo ora latsaka fahefany tolakandro, ny loholona Lylison René, avy amin’ny Mapar sy ny manampahaizana momba ny harena an-kibon’ny tany sady mpikaroka any Frantsa, Randrianasolo Brice.
Mangarahara eo amin’ny fitantanana
Nifantohan’ny fandaharana Ankitsipo iarahana amin’ny tonian’ny fanoratana, Boaza sy ireo vahiny roa ireo ny « Raharaha Anjozorobe » sy ny momba ny harena an-kibon’ny tany, sy ny andramena ary ny fanamarihana ny Andron’ny 8 marsa teo. Voaresaka tamin’izany ny tokony hahafantaran’ny vahoaka ny harena eo aminy na an-kibon’ny tany na an-tanety na an-dranomasina. Niraisan’ny vahiny hevitra ny tokony hametrahana ny mangarahara amin’ny sehatra rehetra. Manomboka any amin’ny mpitondra, miaraka amin’ny tamberina andraikitra avy amin’ny mpitantana isan’ambaratongany.
Ankoatra izany, nivoitra koa ny tokony hanomezana ny vehivavy sehatra, ka nilazan’ny vahiny fa sao mba efa tonga ny fotoana hitondran’ny andriambavilanitra ny firenena.
Ampahany amin’ny fandaharana, nandeha ny zoma teo ary haverina, rahampitso, ireo.
Manomboka izao, harahintsika isaky ny zoma aorian’ny fampahalalam-baovao, amin’ny 9 ora alina eo anivon’ny Kolo TV, ny « Ankitsipo ».